Kulanka Washington Afrika maxay ka faa'iidaysaa? - BBC Somali
Kulanka Washington Afrika maxay ka faa'iidaysaa?
Magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxaa maanta ka furmaya shirweyne ay yeelanayaan hogaamiyayaasha Qaaradda Afrika iyo Mareykanka.
Madaxwayne Obama, ayaa ku martiqaaday in ka badan 50 ka mid ah hogaamiyayaasha Qaarada Afrika in ay ka qeyb qaataan shirkaasi oo looga hadli doono arrimo ay ka mid yihiin; sidii la isku dhaafsan lahaa maalgashi iyo ganacsi.
Hogaamiyayaasha la mirti qaaday waxaa ka mid ah Madaxwaynaha Somaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Haddaba muxuu yahay xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika? Prof Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Minnisota waana khabiir wax ka qoray arrimaha Afrika iyo Mareykanka, waxaana uu u warramay weriyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen.